जीवनशैली Archives - Bulbul Samachar
मंगलबार, बैसाख ६ गते
घायलश्री कसैको नजरमा म दामी भएँ कसैको नजरमा हरामी भएँ । जब हाँसेर सोध्यौ हालखबर तिमीले त्यही दिनदेखि म विरामी भएँ ।। माथि प्रस्तुत मुक्तक म्याग्दीका युवा साहित्यकार प्रेमजंग कार्की यानेकी दीपक कार्की “विखर्ची”का...
आइतवार, माघ १६ गते
एसपी आशा, वरिष्ठ उपन्यासकार ० तपाईको जन्म कहिले भएको हो ?मेरो जन्म २००१ साल साउनको ३० गते काठमाडौंको सीतापाइलामा भएको हो । ० तपाईको शिक्षादीक्षा कसरी सुरु भयो ?हाम्रो समयमा अहिलेको जस्तो साधन थिएन...
शनिवार, पुष ३ गते
प्रकाश आचार्य कुनै जमानामा ‘बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर, किरे मिरे जाले रुमाल’ गीत खुब ‘हिट’ थियो । ‘नबोलाउ हातले बरु बोलाउ पिपलु पातले, किरे मिरे जाले रुमाल, बेनीको बजार जता माया...
सोमवार, मंसिर ६ गते
लम्जुङमा जन्मिएर पोखरालाई कर्म थलो बनाई विभिन्न संग हसस्थामा कृयाशील ब्यक्तिको नाम नै दीपक “समीप” हो ।२०३३पिता रामबाहार श्रेष्ठ र माता नानीमाया श्रेष्ठका कोखबाट सोतीपसल, लमजुङमा जन्मिएका दिपक “समीप” नेपाली साहित्य जगतमा २०४९ सालदेखि...
आइतवार, भदौ २० गते
विवाह दुई व्यक्तिहरू मध्य (प्रायः एक नर र एक नारी) को सामाजिक, धार्मिक अथवा कानुनी रूपबाट एक अर्का संगै जीवन ब्यतित गर्ने सम्बन्ध हो। विवाहले दुइ परिवार बिच नया नाता सम्बन्ध जोड्ने काम गर्छ...
आइतवार, साउन ३१ गते
जीवन यात्रा हो, यसलाई पूरा गर्न पाइला (पद) चाल्नुपर्छ । अन्य साधनबाट भन्दा आफ्नै पदबाट गरिएको यात्रा वा हिँडाइको विशेष महत्त्व छ । पदयात्रा साधना पनि हो, जसले शारीरिक र मानसिक स्वस्थता प्रदान गर्छ...
बुधवार, साउन २७ गते
ठूलो भएपछि के बन्छौं ? बाल्यकालमा हामीले झेल्ने प्रश्न हो यो । यसको उत्तरमा धेरैले भन्छन्, ‘म ठूलो मान्छे बन्छु ।’ तर, ठूलो कस्तो ?धनी, प्रभावशाली, विख्यात, शक्तिशाली । कोही मान्छे धनाड्य हुनसक्छन्, कोही...
कठिनाइलाई कसरी जित्ने ?
लगनशील व्यक्तिसँग कठिनाइलाई जित्ने कुन रहस्यमयी शक्ति हुन्छ ? के लगनको गुणले व्यक्तिको मस्तिष्कमा कुनै प्रकारको आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधिलाई उत्पन्न गर्छ, जसले पराभौतिक शक्तिलाई आफ्नो सम्पर्कमा लिएर आउँछ ? के अनन्त प्रज्ञा...
आइतवार, असार २७ गते
राज्यले दमन गर्दै गए प्रतिरोध हुने कुरा हो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीसरकारसँग तपाईंहरुको पार्टीले गरेको सहमति पालना गरिरहेको पनि छैन । जेलभित्र र बाहिरका नेता कार्यकर्तामा एकप्रकारको छटपटी देखिन्छ...